Mmemme 8 iji mepụta egwuregwu na PC ọbụlagodi amaghị etu esi eme mmemme 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Enwere mmemme na-enye gị ohere ịmepụta egwuregwu ọbụlagodi na inwere ma ọ bụ na ị nweghị ihe mmemme mmemme. Site na sọftụwia a ọ ga - ekwe omume ịzụlite egwuregwu multiplatform na 2D na 3D, yana isiokwu sitere na RPG gaa egwuregwu agụmakwụkwọ. Enwere nhọrọ n'efu ma kwụọ ụgwọ iji dabara mmefu ego ọ bụla.
Playback / eri
Twine bụ otu n’ime ihe e kere eke egwuregwu na-achọ obere ma ọ bụ enweghị nghọta banyere asụsụ mmemme. Agbanyeghị, mmemme a bụ maka mmepe egwuregwu eji ede ederede, nke na-enye ohere ịmepụta akụkọ mmekọrịta na nke na-abụghị nke ederede.
Ezigbo maka njem, ịrụ ọrụ na ndi mmadu ihe omimi, biputere nsonaazụ na HTML. Usoro ahụ na-enye gị nnwere onwe iji mee ka egwuregwu ahụ dị na nyiwe dị iche iche site na ihe nchọgharị ahụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime ka ọ bụrụ ngwa PC ma ọ bụ ama, ị ga-eji onye ntụgharị.
Mpịakọta (n'efu): Windows | macOS | Linux | Weebụ
2. Ezigbo Engine
Ezighi ezi Injin na-ahapụ gị ịmepụta ihe niile site na egwuregwu 2D dị mfe na utu aha nwere ihe osise 3D mara mma. Na usoro iwu, ikwesiri inwe ikike mmemme iji jiri ya. Ma a na-enye ihe ngwọta nke onye na-amalite ịmalite, nke a na-akpọ Plano.
Ngwaọrụ a dị ike nke na enwere ike iji ya rụọ ọrụ dị mgbagwoju anya, dịka Megharịa de Final Fantasy VII. Enwere ike mbupụ egwuregwu emepụtara na nyiwe dị iche iche, dịka PC, egwuregwu vidiyo, ekwentị, ngwa ọrụ eziokwu dị n'etiti, na ndị ọzọ.
Ọrụ a bụ n'efu, ruo mgbe ọrụ gị ga-enweta $ 3,000. Site n'ebe ahụ, onye okike ga-akwụrịrị 5% nke uru Epic Games, onye nrụpụta nke Unreal Engine.
Igwe eleghi anya (n'efu): Windows | macOS | Linux
GameMaker Studio 2 - Dọrọ na dobe
N'agbanyeghị na akwado egwuregwu 3D, a maara GameMaker nke ọma maka ịme egwuregwu 2D. Ihe omume a putara ihe di nfe iji nye ndi mmadu ohere imeputa egwuregwu nke aka ha. Na-edeghị akara nke koodu, na-eji usoro ịdọrọ na dobe.
Mana nke ahụ apụtaghị na onye ọ bụla maara etu esi ede koodu agaghị enwe ọchị. Ọ bụrụ na ị so n’òtù ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi okike n’ụzọ ọ bụla ịchọrọ. Ọrụ ahụ na-enye gị ohere ibupụ nsonaazụ ya na ọtụtụ nyiwe. Agbanyeghị, n'ụfọdụ, ọ dị mkpa ịkwụ ụma ego.
GameMaker Studio 2 (akwụ ụgwọ, na ụdị nnwale efu): Windows | Mac os
Gamesalad bu ezigbo ihe diri ndi ohuru n’elu mmepe egwuregwu a. Ọ chọghị ihe ọmụma banyere asụsụ mmemme, na-enye gị ohere ịmepụta site na iji usoro ịdọrọ na dobe.
Sọftụwia ahụ na - ekwe nkwa nsonaazụ dị mma na 2D, n'agbanyeghị na enweghị oke ego. Ikpo okwu a nwekwara nsụgharị nke ebumnuche maka agụmakwụkwọ, na ebumnuche nke izi echiche nke mmemme, imepụta egwuregwu na okike nke mgbasa ozi dijitalụ.
Ndị debanyere aha na Pro mbipute nwere ike bipụta na isi nyiwe niile dịka HTML, kọmputa, na ngwaọrụ mkpanaka.
GameSalad (akwụ ụgwọ, na ụdị nnwale efu): Windows | Mac os
5. Ọrụ onye na-egwu egwuregwu na-egwu egwu
Dị ka aha ya na-egosi, RPG Maker bụ ngwá ọrụ maka ịmepụta egwuregwu egwuregwu 2D. Ọrụ egwuregwu. Usoro ihe omume ahụ nwere ọtụtụ nsụgharị dịnụ, na-enye atụmatụ dị iche iche. RPG Maker VX na-ekwe nkwa ịdị mfe nke na ọbụna nwatakịrị nwere ike iji ya.
Nke ahụ bụ, ọ dịghị ihe ọmụma mmemme achọrọ iji mepụta egwuregwu, naanị ịdọrọ na dobe. Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịmepụta ihe odide, fanye egwu na nsonaazụ ụda, n'etiti ọrụ ndị ọzọ. Egwuregwu ahụ nwere ike ibupụ na HTML5, Windows, macOS, Linux, Android, na iOS.
Onye okike RPG (akwụ ụgwọ, na ụdị nnwale n'efu): Windows
Ọchịchọ bụ ngwa ọrụ na - enye gị ohere igwu egwuregwu egwuregwu mmekọrịta n’amaghị etu esi eme mmemme. Agbanyeghị na elekwasị anya na ederede ahụ, enwere ike itinye foto, egwu na nsonaazụ ụda. A na-akwado vidiyo YouTube na Vimeo.
Onye ọ bụla nwere mmemme mmemme nwere ike ịhazi ọdịdị nke egwuregwu ahụ n'ụzọ ọ bụla masịrị ha. Enwere ike ibupụ nsonaazụ ya na PC ma ọ bụ dị ka ngwa mkpanaka.
Chọọ (n'efu): Windows | Weebụ
Unitydị n'otu bụ nhọrọ maka ndị maara mmemme. Free ka ọrụ ịkpata ihe na-erughị $ 100.000 kwa afọ, software na-ahapụ gị ike 3D egwuregwu na pụtara ndịna.
Ihe omume a nwere animation, ngwa ọdịyo na vidiyo, ntinye ntinye, ọkụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwere ike bipụta ọrụ ahụ na nyiwe dị iche iche, dịka PC, ekwentị, egwuregwu vidiyo na ngwaọrụ VR na AR.
.Dị n'otu (n'efu, na nhọrọ atụmatụ ịkwụ ụgwọ): Windows | macOS | Linux
Kahoot abụghị n'ezie usoro mmepe, mana ọ nwere ike ịba uru maka ndị chọrọ ịmepụta egwuregwu agụmakwụkwọ dị mfe. Saịtị ahụ na-enye gị ohere ịmepụta ajuju, eziokwu ma ọ bụ okwu ụgha, egwuregwu mgbagwoju anya, n'etiti ihe ndị ọzọ iji jiri klaasị ma ọ bụ ihu na ihu.
O kwere omume ịtọ ọnụ ọgụgụ nke isi na fanye Oge, iji mee ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe egwuregwu na asọmpi. A na-egosipụta ihe niile n'otu n'otu na ihuenyo ụmụ akwụkwọ ọ bụla, ma ọ bụ site na ngwa raara onwe ya nye ma ọ bụ ụdị weebụ nke ọrụ ahụ.
Kahoot! (n'efu, na nhọrọ atụmatụ ịkwụ ụgwọ): Weebụ | A gam akporo | iOS
Kedu mmemme iji mepụta egwuregwu?
Ihe niile ga-adabere na nkà gị, ebumnuche na ụdị akụrụngwa ị nwere.
E nwere ngwaọrụ ndị na-enye egwuregwu dị njikere dịka Kahoot, ebe ndị ọzọ chọrọ nka asụsụ mmemme, dịka Unity. Yabụ tupu ịhọrọ, ị kwesịrị ịtụle atụmatụ gị na mmemme mmemme gị.
Mmemme egwuregwu ga-adị mma maka ndị na-achọghị itinye ego na ọrụ na-emepe emepe. Ndị nwere ike ịmepụta site na ịpị na ịdọrọ ihe egwuregwu na-achọ obere nghọta nke isiokwu ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ dị mfe iji, ha na-enye nnwere onwe okike karịa na ihe ndị eji ahazi. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ ịmụta mmemme na itinye ego na mbara igwe egwu. Nke a bụ ikpe na GameMaker Studio 2 na Quest.
Ọ bara uru ịkọ na ọtụtụ mmemme, ọbụlagodi ndị nwere akụ maka ndị mbido, nwere ihe enyemaka maka ndị maara nke ọma na mmemme. Ndị ọrụ a nwere ike inyocha nhọrọ ọzọ, na-emezi akụkụ ọ bụla nke egwuregwu ahụ.
Ọ dịkwa mkpa ịtụle akụrụngwa ịkwesịrị ịzụlite. Tupu ịmalite ibudata ihe omume ahụ, ị ​​kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na kọmputa gị na-emezu ihe kachasị mkpa. Ọ dị mkpa na ị nwere ngwaike nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu na enweghị ọdịda.
Ma ọ bụghị ya, họta sọftụwia dị mfe karịa obere akụrụngwa ma ọ bụ ngwa dị n'ịntanetị. N'ụzọ ahụ, ọbụlagodi, ị nwere ike ịme ihe ọ bụla ịchọrọ.
Chọrọ ịmepụta egwuregwu na-adabere na akụkọ ma ọ bụ na-ahọrọ egwuregwu 3D Fps? Mgbe ahụ ọ dị mkpa iji nyochaa akụ nke mmemme ahụ na-enye, iji hụ na ọ ga-eweta nsonaazụ achọrọ.
Ọ bụrụ na egwuregwu ịchọrọ ịzụlite nwere ngwa pụrụ iche, anyị na-akwado ka ịhọrọ ya. Dịka ọmụmaatụ, RPG Maker na-enye atụmatụ ndị akọwapụtara maka ụdị akụkọ a, nke ị nwere ike ị gaghị ahụ na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ma ọ bụ na ị ga-ahụ ha n'ụzọ pere mpe.
Ọzọkwa, ọ dị mkpa ịlele ma ọ bụrụ na ngwanrọ ahụ na-ebupụ egwuregwu ahụ gaa na ikpo okwu achọrọ. Enweghị isi n'ịzụlite egwuregwu zuru ezu wee chọpụta na enweghị ike igwu ya na ekwentị ma ọ bụ ngwaọrụ eziokwu dị adị.
Otu esi emepụta ngwa n'amaghị mmemme? Chọpụta ngwaọrụ dị ịtụnanya
Trial ngwa ọdịnala maka fun na mmụta n'otu oge
Ngwa ezi uche dị na ya iji zụọ echiche na ncheta